कोरोना महामारीबीच घरमै बसी-बसी गर्न सकिन्छ यी १० काम, कमाइन्छ मनग्य दाम
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा धेरैजसो मानिसको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ। सरकारद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरु घरमै बस्न बाध्य छन्। दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता र महामारीको यो अवस्थामा भवितव्यका लागि खर्च कम गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच मानिसहरुसँग लगानीका लागि पैसाको अभाव देखिएको...
सन् २०२१ मा कोभिड-१९: भाइरसबारे हामीले जानेका कुरा
एमेलिया बटरली -बीबीसी विश्व सेवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले महामारी घोषणा गरेको १ वर्षमा हामीले भाइरसलाई बुझ्न र नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिकहरूले अभूतपूर्व प्रयास गरेको देखेका छौँ। विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिल्यै कहिल्यै नदेखिएको तहको साझेदारी गरेका छन् र ज्ञान, अनुसन्धान र खोपको विकासमा वर्षौँसम्म लाग्ने काम केही...
कोरोना कहर: विवाहको ५ घण्टामै बितिन् दुलही !
काठमाण्डौ । कोरोनाको दोश्रो लहरले कतिपय सुन्दर जीवनहरु तहसनहस बनाइदिएको छ । जोडिइसकेका जीवन भत्किएका छन् भने जोडिँदै गरेका जीवन बर्बाद पार्न समेत भाइरस उद्यत देखिएको छ । हाम्रै असावधानीका कारण हाम्रै देश र छिमेकमा हृदयविदारक घटनाहरु हुन थालेका छन् । नेपालको भक्तपुरमा केही दिनअिघ विवाह भएको केही दिनमै दुलहीको कोरोना संक्रमणका कारण...
काठमाण्डौ । इटलीको एउटा अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले पूरा तलब प्राप्त गर्ने गरी लगाइएको काम १५ वर्षदेखि नगरेको आरोप लगाइएको त्यहाँको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। दक्षिणी सहर क्याटानजारोस्थित चाच्चो अस्पतालमा कार्यरत ती कर्मचारी सन् २००५ बाटै काममा आउन छाडेको आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि ठगी, जबरजस्ती पैसा असुलेको अनि...
कोरोनाका कारण ब्रजिलमा किन धेरै शिशुहरुको ज्यान गइरहेको छ ?
नतालिया पसारिन्यो र लुइस बर्रोचो -ब्रजिल कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा ब्रजिलमा अहिले कोभिडका कारण हुने मृत्युदर उच्च तहमा पुगेको छ। धेरै प्रमाणहरूका अनुसार कोभिड-१९ ले दुर्लभ रूपमा मात्र भर्खरैका बालबालिकाको ज्यान लिन्छ। तर ब्रजिलमा कोरोनाभाइरसबाटै १,३०० भन्दा बढी शिशुको ज्यान गइसकेको छ। एक चिकित्सकले...
कम उमेरमै मनग्य पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ३ टिप्स
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थव्यवस्था र मानिसको आर्थिक अवस्था निकै खस्किएको छ। यो बेला यदि कसैले लगानी कुरा गर्छ भने तपाइँ हामी पैसाको समस्या देखाउँछौँ। तर पैसाको समस्या त्यति नै छिटो हल हुन्छ जति छिटो हामी लगानी गर्न सुरु गर्छौं। हामीले बैंक खातामा मात्रै पैसा राखेर राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उचित...
सुनको पहाड भेटिएपछि... हारालुछ !
काठमाण्डौ । तपाइँले थुप्रै पहाडहरु देख्नुभएको होला। कतिपय पहाडहरुका बारेमा सुन्नु पनि भएको होला। तर सुनको पहाड भेटियो भन्दा तपाइँले नपत्ताउनु होला। यस्तो पनि हुन्छ र भन्नुहोला। यो वास्तविकता हो । कंगोको किभु प्रदेशको लुहिही भन्ने गाउँमा एउटा सुनको पहाड भेटिएको छ। सुनको पहाड भेटिएको खबर फैलिना साथ स्थानीय मानिसहरु आआफ्नो औजार...
एक जापानी अर्बपति, जो खोज्दैछन् सित्तैमा चन्द्रामाको यात्रामा जान चाहने ८ व्यक्ति
काठमाण्डौ । जापानका एक अर्बपति युसाका माएजावाले आफूसँग चन्द्रमाको यात्रा गर्नका लागि विश्वभरीबाट आठ जना सर्वसाधारणलाई आमन्त्रण गरेका छन्। उक्त यात्रा इलोन मस्कको स्पेसएक्स रकेटमा हुनेछ। "म चाहन्छु यसमा विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिस जोडिउन्," उनले ट्वीटरमा राखिएको भिडिओमा भनेका छन्। उनले त्यसका लागि त्यहाँ आवेदन भर्ने विवरणहरू...
– ताराप्रसाद फुल्लेल घरि लुकाइदिन्छन्, घरि सुकाइदिन्छन्, घरि फुलाइदिन्छन्, घरि कोखाई कोखाई गरी भुलाइदिन्छन्, तिमीमा आँट पक्कै छ, समय चिन्न सक्छौ, विषयवस्तुको धैर्यता छ, मोलमोलाई गर्ने जमातलाई पहिचान गर्न सक्छौ, कहिले तिमीमाथि अन्याय गर्छन्, तिम्रो सौन्दर्यताको तारिफ गर्न नसकेर, तिमी हिँड्ने बाटो साँगुरो बनाउँछन्, कहिले...
मार्गरिटा रोड्रिगेज -बीबीसी न्यूज मुन्डो “म एकदमै राम्रो महसुस गरिरहेको छु।” पाँच वर्षदेखि नुहाउन बन्द गरेका चिकित्सक डा. जेम्स हम्ब्लिन आफ्नो निर्णयबारे सोधिने प्रश्नको यसरी नै जवाफ दिन्छन्। "तपाईँलाई बानी पर्दै जान्छ। सामान्य महसुस हुन्छ," उनले बीबीसीसँग भने। ३७ वर्षका हम्ब्लिन येल विश्वविद्यालयको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका...
काठमाण्डौ । कुनै पनि कम्पनी वा उद्योगधन्दा एक्लो प्रयासमात्र चलाउन सम्भव हुँदैन। मालिक र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध भएमात्र त्यस्ता कम्पनी वा उद्योग सफल हुन्छन्। यस्तै एउटा कम्पनी हो टाटा, जुन विश्वर आफ्नो ब्रान्डका लागि लोकप्रिय बनेको छ। कारण, यो कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा र कर्मचारीबीचको राम्रो सम्बन्ध। रतन टाटा...
काठमाण्डौ । कोही अर्बपति उद्योगपतिले आफ्नो २ अर्ब डलरको कम्पनी १२० रुपैयाँमा बेच्लान् भन्ने कुरा तपाई पत्याउनुहुन्छ ? सायदै पत्याउनुहोला । तर, मानिसको जीवनमा कहिलेकाही परिस्थिति यस्तो आइदिन्छ कि, यस्तै नसोचेको घटना भइदिन्छ । यूएईका भारतीय मूलका अर्बपति बीआर शेठ्ठीले यस्तै अनपेक्षित कदम उठाउनुपर्यो । शेठ्ठीको फिनाब्लर पिएलसीले...
काठमाण्डौ । त्यसो त ९ वर्षको उमेर बच्चाका लागि खेल्ने, कुद्ने र पढ्ने बेला हो। तर केही यस्ता बच्चा पनि छन्, जसले यो उमेरमा पैसा नै कमाउन थालेका छन्। यस्तै एक बालक हुन् रेयान काजी। उनले ६ वर्षकै उमेरदेखि पैसा कमाउन सुरु गरेका थिए। तपाइँ सोचिरहनुभएको होला ९ वर्षे बच्चा कति नै कमाउँछ होला र ? तर रेयानको कमाइ थाहा पाउनुभयो भने तपाइँ होस...
काठमाण्डौ । जब तपाइँ कुनै रेस्टुराँमा खाना खान जानुहुन्छ तब तपाइँ त्यहाँको सर्भिसलाई पनि ध्यान दिनुहुन्छ। सर्भिस राम्रो लाग्यो भने तपाइँले राम्रै टिप दिन्छौँ। गत डिसेम्बर १२ मा अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया सहरमा एउटा इटालियन रेस्टुराँमा ग्राहकले दिएको टिपको अहिले मिडियाहरु निकै चर्चा चलिरहेको छ। उक्त रेस्टुराँमा एकजना ग्राहकले...
काठमाण्डौ । यदि तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने थोरै खानुहुन्छ अनि धेरै व्यायाम गर्नुहुन्छ। पैसाको मामिलामा पनि यस्तो नियम लागू हुन्छ। खर्च कम गर्नुहोस् र धेरै बचत गर्नुहोस्। यो नियमले तपाइँको वित्तीय स्वास्थ्य दरिलो बन्छ। तपाइँ जागिरदार हुनुहुन्छ। भविष्यमा राम्रै बैंक ब्यालेन्स तयार चाहनुहुन्छ। अनि अवकाशपछि जीवनयापन सहज र अन्य...